Sirta Raadinta Raaxada Nafta | KEYDMEDIA ONLINE
Dr. Axmad Cabdulahi (Keydmedia) - Nin taajir ah ayaa Wiilkiisii u diray inuu soobarto Sirta raaxada Nafta/ xasiloonida, wuxuuna u diray Ninka Dadka ugu kasmada iyo xikmada badnaa.
Wiilkii wuxuu sii socday 40 Maalmood, wuxuuna soo gaaray Daar aad u Qurux badan, oo kutaala meel aad usaraysa. Waxaana degenaa Gurigaa Caqilkii Wiilka waxbari lahaa, waxaana hortaagnaa dad aad ufara badan oo dhamaantood Caqilka sugaya, s'iay wax uga bartaan.
Wiilkii wuxuu bilaabay inuu fuulo jaranja-rooyinkii daarta, wuxuuna ukala wareegay kor iyo hoos, isagoo aad ufiirinaya qaadada si'ayna saliidu uga daadanin.
Markuu usoolaabtay Caqilkiina wuu uga shekeeyay wixii uu soo arkay. Wuxuuna weydiiyay: Aaway salidii aan ku'iri, aad u ilaali, markuu fiiriyay qaadadiina wuxuu arkay inay eber tahay, saliliidiina mar hore daadatay.
Cuduradaasina waxay dadka kuqasbaan inay raadiyaan wax kabadan baahidooda dhabta ah ee hada taagan, iyagoo sii xisaabinaya baahida imaan doonta (intaa intaaa kusiidar, sii badi iwm). Hadaba saqaf mau samayn karaa damaceena, hawadeena siaan raaxo -Keydmedia- ugu noolaano, danteean dhabta ah uga fikiro.